‘बालमन्दिरभित्रै आएर पनि गुप्तचरले ‘रायन’ पत्ता लगाउन सकेनन्’ - Aksharang
२०७७ चैत २९ आइतबार
संस्मरण२०७६ मंसिर २७ शुक्रबार
‘बालमन्दिरभित्रै आएर पनि गुप्तचरले ‘रायन’ पत्ता लगाउन सकेनन्’
राल्फा साङ्गीतिक समूहमा लागेर क्रान्तिकारी गीत गाउँदै हिँडेका रायन राजपरिवारसम्बद्ध बालमन्दिरको विद्यालयमा शिक्षण गर्छन् भन्ने कुरा गुप्तचरहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेनन् । रायनले अक्षरङ्ग का लागि रमण घिमिरेलाई यी र यस्तै प्रसङ्गहरू यसरी सुनाए–
म त्यति बेला रेडियो नेपालमा करारमा गाउँथेँ । गाउँदै गएपछि बिस्तारै थाहा पाएँ– त्यहाँ बाहिरबाट आउने कलाकारलाई असाध्य शोषण गरिँदोरहेछ । काठमाडौँ र बाहिरका कलाकारहरूबीच ठूलो भेदभाव हुँदोरहेछ । हामी त पहाडबाट बढो दुःख र अभाव बोकेर आएका थियौँ । हाम्रो पहिरन र लबजले नै पहाडे भनेर छुट्ट्याउँथ्यो । यहाँका कलाकारहरू सुकिला–मुकिला थिए । तिनका नजरमा हामी त ढाक्रे ! तर पनि हामीले गाउने फरक खालका लोकगीतका कारण हाम्रो छुट्टै र राम्रो कलाकारको पहिचान बनियो । गीत गाएको थोरै रकम पाउँथ्यौँ– एउटा गीतको जम्मा १० रुपियाँ पाउँथ्यौँ । महिनामा दुईदेखि चारवटासम्म गीत हाम्रो भागमा पथ्र्यो । यही २०–४० रुपियाँँ पारिश्रमिकका भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यो पारिश्रमिकमा पनि शोषण भयो । हाम्रो नामको पारिश्रमिकको चेक त्यहीँका लेखा शाखाका कर्मचारी र वरिष्ठ कलाकारहरूले भँजाएर खाएछन् ।
हाम्रो पारिश्रमिक अरूले नै पच पारेको कुरा मञ्जुलबाट हामीले थाहा पायौँ । त्यस बेला मञ्जुल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्थे । एक दिन उनले तिमीहरूले आज चिया खुवाउनुपर्छ भने । हामीले भन्यौँ– हामीसँग कहाँबाट पैसा हुनु र चिया खुवाउनु ? अनि उनले भने– ‘आज तिमीहरूको पारिश्रमिकको चेक त साटिएको छ त !’ अनि हाम्रो मनमा चिसो प-यो । हामीले त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशमान सिंहलाई भेट्यौँ । त्यस बेला निर्देशकलाई भेट्नु भनेको पनि राजालाई भेट्नु बराबर हुन्थ्यो । उनले तिमीहरूले पारिश्रमिक पाउँछौ भनेर आश्वासन त दिए तर हामीले त्यो पाएनौँ । त्यस बेला मकरबहादुर बान्तवा विशेष प्रहरीका प्रमुख थिए । उनी बडाहाकिम भएर २००७ सालदेखि नै ओखलढुङ्गामा बसेकाले उनीसँग हाम्रो चिनजान थियो । हामीले उनीसँग यसबारे गुनासो ग-यौँ । उनकै सल्लाहमा हामीले एउटा निवेदन दियौँ । उनले भोलिपल्टै रेडियो नेपालमा छापा मारिदिए । त्यो बेला कुनै संस्थामा छापा मारिनु भनेको ठूलै काण्ड हुन्थ्यो । त्यसपछि रेडियो नेपालमा हाहाकार मच्चियो । कलाकारहरू भागभाग भए, कति भूमिगत पनि भए । यो कुरा दरबारसम्म पुग्यो तर केही कलाकारहरू राजदरबारका प्रिय भएकाले कसैमाथि कारबाही भएन ।
यही काण्डले हो या कसरी हो त्यसपछि वान्तवाको सरुवा नै भयो । उनको ठाउँमा छिरिङतेन्जिङ लामा आए । उनलाई पनि चिनेका थियौँ तर दरबारको दबावमा परेर उनले हामीलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिए । तर वान्तवाले मेरो हातबाट पैसा पायौ भने मात्र लिनु नत्र नलिनु भनेकाले हामीले मिलापत्र गर्न मानेनौँ । त्यही बेला लामा पनि मेची अञ्चलको अञ्चलाधीश भएर झापा गए । अनि यो हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको कुरा हुनपुग्यो । यो घटना त्यत्तिकै सामसुम भयो । त्यसपछि हामीलाई रेडियो नेपालले पूरै पाखा लगायो । हाम्रै पारिश्रमिक पचाउनेहरूले उल्टै हामीलाई काट्छौ, मार्छौं भन्नेसम्म धम्की दिनथाले । अनि केही सीप नलागेपछि हामीले रेडियो छोड्यौँ ।
यो मात्र होइन । हामीलाई रेडियो नेपालले गीत सेन्सरका नाममा पनि अत्तो थाप्थ्यो । पञ्चायत भर्खरभर्खर सुरुभएको बेला थियो– २०१९ सालको कुरो हो । हामीले एउटा ठेट लोकगीत तयार पारेका थियौँ– ‘गाई चर्नेमा भैँसी च-यो वनको सेखी झ-यो, वनको राजा कुसुन्डालाई हजुर भन्नुप-यो’ । रेडियो नेपालमा त्यतिबेलाका नामी कवि–सङ्गीतकारहरू नै थिए गीत जाँच्नेमा । तर तिनीहरूले ‘धत् यस्तो गीत पनि पास हुन्छ’ भनेर सेन्सर गरिदिएनन् । यसलाई तिनीहरूले प्रजातन्त्रको ठाउँमा पञ्चायत ल्याएको र राजालाई अपमान गरेको भन्ने अर्थ लगाए । पछि हामीले हामीले ‘मै हुँ भन्ने सान्नानीलाई हजुर भन्नुप-यो’ भनेर शब्द बद्लेर रेकर्ड ग-यौँ ।
त्यही बेला पारिजात दिदीसँग भेट भयो । पारिजात त्यतिबेला गीत लेख्नु हुन्नथियो । हाम्रा गीत सुनेपछि हाम्रै आग्रहमा उहाँले गीत पनि लेख्नुभयो । ती गीतमा हामीले सङ्गीत भरेर सुनायौँ । अनि सङ्गीतमा नयाँपनको कुरा आएपछि यसलाई एउटा नयाँ नाम दिइयो । अनि रामेश, म, मञ्जुल र अरिमसम्मिलित ‘राल्फा’ समूहको जन्म पारिजात दिदीकै कोठाबाट भयो । त्यसपछि हामी कोठाबाट सडक, स्कुल, डबली, चोक हुँदै आमजनतासँग जोडिन थाल्यौँ ।
एकातिर सङ्गीतमा नयाँपनको कुरा लिएर राल्फा अगाडि बढिरहेको थियो, अर्कोतिर मचाहिँ १०–४ को शिक्षक भएर बालमन्दिरमा काम गर्नथालेँ । त्यो बाल सङ्गठनअन्तर्गत अनाथ बालबालिकालाई राख्ने संस्था थियो । तीन–चार सय नानीहरू त्यहाँ बस्थे । तत्कालीन रानी रत्न बालमन्दिरकी संरक्षिका थिइन् । ती अनाथहरूका लागि खोलिएको विद्यालय थियो । त्यति बेलासम्म नयाँ शिक्षा लागू भइसकेको थिएन । तर ‘मोडेल’ स्कुल भनेर देशका विभिन्न पाँच ठाउँमा यस्ता स्कुलहरू खोलिए । यसअन्तर्गत बालमन्दिर पनि प¥यो । र यसका लागि विशेष शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने आह्वान भयो । मैले पनि अन्तर्वार्ता दिएँ र विशेष शिक्षक भएर त्यहाँ २०२४ देखि ०४८ सालसम्म २४ वर्ष शिक्षण गरेँ ।
त्यहाँ रानी रत्न, राजा महेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यहरू आइरहन्थे । रानी त हप्ताको दुई–तीनचोटि नै बालमन्दिर आउँथिन् । हामीले पढाउनेबाहेक उनीहरूले लगाए–अह्राएको प्रशासनिक काम पनि गरिदिनु पथ्र्यो । विद्यालयमा बढो सतर्क हुनुपथ्र्यो । प्रहरी, सेना, गुप्तचर सँगसँगै तैनाथ हुन्थे । यसरी राल्फाबाट कार्यक्रम गर्दा गुप्तचरहरूले यसको जानकारी सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउनु स्वाभाविक थियो ।
मैले पढाउन थालेकै वर्ष अर्थात् २०२४ सालमा एउटा घटना घट्यो । त्यस बेला राजा महेन्द्र अमेरिकाको टेक्ससमा पुगेका रहेछन् । त्यहाँको एउटा लोकसङ्गीत प्रस्तुत गर्ने समूहलाई भेट्दा राजाले ‘नेपालमा यस्तो समूह छैन ?’ भनेर उनीसँगै अमेरिका गएका सांस्कृतिक संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक महेन्द्रनाथ खनालसँग सोधेछन् । रोचक कुरा उनी हल्टीकल्चरका मानिस कल्चरको महाप्रबन्धक भएका थिए । उनले ‘छ सरकार’ भनेर राल्फाको नाम दिएछन् । अनि राजाले ‘यसपालिको पुस १ गते तिनीहरूको कार्यक्रम राख्नू’ भनेर आदेश दिएछन् । त्यतिबेलाका राजालाई खुसी पार्न प्रशासकहरूले जे पनि गर्न तयार हुनुपथ्र्यो । खनाल पनि हामीसँगै रेडियो नेपालमा गीत गाउने भएकाले घनिष्टै चिनाजानी थियो । टेक्ससबाट फर्केपछि खनालले हामीसँग यो प्रस्ताव लिएर आए र भने– ‘सरकारले तपाईहरूको कार्यक्रम हेर्छु भनिबक्सेको छ ।’ हामीले भन्यौँ– ‘को सरकार ?’ उनले भने– ‘महेन्द्र सरकार !’ अनि हामीले फेरि प्रश्न ग-यौँ– ‘को महेन्द्र ?’ वास्तवमा हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रम देखाउँदैनौँ भन्ने अहम्मा थियौँ । हाम्रो जताततै प्रशंसा भइरहेको थियो, त्यसमाथि युवा जोस । हामी उनले प्रजातन्त्रको हत्या गरेको विरोधमा पनि थियौँ । पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेका दिन पञ्चहरू दिपावली गर्थे, हामी कोठामै भए पनि ब्ल्याकआउट गथ्यौँ ।
हामी राजालाई कार्यक्रम देखाउँदैनौँ भनेर अडिग भए पनि महाप्रवन्धक खनालको त जागिरको कुरा थियो । उनले पुस १ गते देखाउने भनेर राजालाई वचन दिइसकेका थिए । उनले ‘मेरो जागिरको सवाल हो यार, तपाईंहरूले कार्यक्रम गरिदिनुभएन भने मेरा त छोराछोरी भोकभोकै पर्छन् । जसरी पनि कार्यक्रम गरिदिनूस भनेर विन्तीभाउ गरे । यता मलाई मेरो बालमन्दिरको मेरो जागिरको पनि सवाल थियो । थाहा पायो भने मेरो जागिर चट् हुन्थ्यो । यसमा दुई थरी कुरा भए– पहिलो कुरा हामी सार्वजनिकरूपमा कार्यक्रम गरि नै रहेका थियौँ । यही कुरा महेन्द्रले पनि सुन्छन् र उनमा पनि केही परिर्वतन आउँछ भने राम्रै कुरा हुन्छ, त्यसैले गरौँ भन्ने भयो । अनि नगर्ने भन्नेहरूको तर्क– हिजो प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने सामन्तलाई देखाउनु हुँदैन, उनीचाहिँ कम्मरमा हात लगाएर हेर्ने अनि हामीचाहिँ उनलाई कम्मरतोड झुकेर नमस्ते गरेर गीत गाउने ? गाउनुहुन्न भन्ने भयो ।
अन्त्यमा गाउनु पनि पर्छ भन्ने तर्कको पछाडि बहुमत देखियो । यसको पनि कारण थियो– त्यस बेला हामीलाई प्रहरीले लखेटिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा ‘राजाले हेरेको समूह’ भन्यो भने हाम्रा लागि त्यो एउटा लाइसेन्स, प्रमाणपत्रजस्तो पनि हुन्थ्यो । गाउँमा जान सजिलो हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले ‘हुन्छ, गाउँछौँ’ भन्यौँ । हामी कार्यक्रममा भाग दिन गयौँ । यद्यपि राजा आउनुअघि नै कलाकारहरू मञ्चभित्र पसिसक्नुपर्ने, राजा ननिस्केसम्म बाहिर जान नपाइने, राजासँग सामूहिक तस्बिर पनिे खिच्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू पनि थिए । तर हामीले यी सबै कुरा अस्विकार ग-यौँ र खालि दौरा–सुरुवालसम्म लगाएर मञ्चमा प्रस्तुत हुने सर्त मान्यौँ । फेरि हामीसँग त दौरा–सुरुवाल पनि थिएन । महाप्रबन्धकले नै सबै व्यवस्था गरिदिए । जिउमा नमिले पनि दौरा–सुरुवाल लगाएर लगातार पाँच–छवटा गीत गायौँ र राजासँग फोटो नखिची राजाभन्दा अगाडि नै हामी हलबाट फुत्त निस्केर डेरातिर लाग्यौँ ।
म दिउँसो बालमन्दिरमा गर्दै बेलुका राल्फामा लागेर विद्रोही गीत पनि गाउन थालिसको थिएँँ । राल्फाको गायक रायन यहीँ काम गर्छ भनेर मलाई खोज्न गुप्तचरहरू बालमन्दिर आउँथे । दरबारभित्रको स्कुल– त्यहाँ हामीले राजारानी, युवराज्ञी, अधिराजकुमारीहरू आउँदा सधैँ बढो सतर्कतापूर्व स्ट्यान्डबाई भएर काम गर्नुपथ्र्याे । तर शिक्षकका रूपमा मेरो नाम थियो, नारायणभक्त श्रेष्ठ । एउटा असल गुरुको रूपमा म त्यहाँ परिचित थिएँ । फेरि त्यहाँकी प्रिन्सिपल थिइन् राजाका स्वकीय सचिवकी भाइ–बुहारी । तिनीहरू श्री ५ भन्दा पनि ठूला श्री ६ नै हुन्थे त्यहाँ । यति हुँदाहुँदै पनि कसैले रायनलाई पत्ता लगाउन सकेन । म बाहिर रायन भित्र नारायणभक्त नै भइरहेँ । प्रहरीहरू त्यो मानिस यही स्कुलभित्र पसेको छ भनेर बरोबर खोज्न आउँथे, प्रिन्सिपल र अरू शिक्षकहरूसँग रायनका बारेमा खोजखबर गर्थे । तर म त्यहाँ त एक राम्रो गुरुको रूपमा नानीहरूलाई पढाइरहेको हुन्थेँ । त्यहाँका शिक्षक साथीहरूलाई पनि म नै रायन हुँ भन्ने थाहा थिएन । पछि तिनै साथीहरू मलाई ‘यहाँ हुँदै नभएको रायन भन्ने गायकलाई प्रहरीले खोज्न आइरहन्छन्’ भनेर सुनाउँथे । बाहिर सतर्क भए पनि त्यस बेला सुराकीहरू जताततै छ्याछ्याप्ती भए पनि एउटा रायनलाई पत्ता लगाउन नसकेकोमा म भित्रभित्रै मुस्काउँथे ।
पहिला महेन्द्र पुलिस क्लबमा कार्यक्रम गर्दा त्यहाँका एक डीएसपी सिंहबहादुर मोक्तानले हामीलाई चिन्थे र सतर्क हुन भनेका थिए । हुनसक्छ स्वयम् प्रहरी महानिरीक्षक रोमबहादुर थापाले पनि हाम्रा गीत मन पराउँथे र उनले पनि हामीप्रति सहानुभूति राखेर हामीलाई सतर्क गराउन खोजेका थिए कि ! तर, म अरू साथीहरूभन्दा बढी सतर्के थिएँ, किनभने म बालमन्दिरमा काम गर्थेंं । तर तिनीहरूले जति नै कोसिस गरे पनि रायन र नारायणभक्त श्रेष्ठ एउटै व्यक्ति हो भनेर पत्ता लगाउन सकेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा चैत ३ गते जब हामी प्रहरी खोरमा पुग्यौँ । त्यहाँ टेलिभिजनले खिचेर मेरो अनुहार देखायो र रायन भन्ने व्यक्ति म नै हुँ भनेर धेरैले चिने । तर त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था नै ढलेकाले रायनलाई चिनेर पनि मेरो जागिरमा कुनै अवरोध आएन । बरू अहिले म नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति भएपछि रायन र नारायणभक्त एउटै व्यक्ति रहेछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको छ ।
भिडीयो हेर्नुहोस् ।
कहिले उत्तर पाऊला ?
सुतेको बाघलाई नजिस्क्याउनु !